Fomba 5 manova ny traikefa amin'ny fivarotana | Martech Zone
Ity infographic avy amin'ny Moki, orinasa iray manampy ny orinasam-pandraharahana hiantoka, hanara-maso ary hitantana ny rindranasan'izy ireo finday, manome fomba fijery 5 tsy manam-paharoa izay Ny tablette dia manatsara ny traikefa fiantsenana antsinjarany:
Sary ity fivarotana - Raha tokony maminavina ny fomba fiasa na fampisehoana ataon'ny vokatra iray ianao dia manome ohatra tsy mamela sary an-tsaina akory ny horonantsary amin'ny takelaka.
Signage - Mitombo ny lazan'ny takelaka nomerika tantanina lavitra, mamela ny marketing sy ny asa ataon'ny olona hanatsara ny fomba fifandraisan'izy ireo amin'ny fampisehoana mahafinaritra sy mahafinaritra.
Fampisehoana vokatra ao amin'ny magazay - ny fahaizana maneho mazava ny fahasamihafana sy ny endrik'ireo vokatra ao anaty takelaka kely tsara fa tsy fampisehoana goavambe dia afaka mifantoka amin'ny saina sy mampihena ny korontana sy ny efitrano fisehoana mivantana.
Serivisy ho an'ny mpanjifa - tsy afaka ho aiza na aiza na aiza ny mpiasao, fa ny kioska vita amin'ny takelaka dia afaka ary avelany hikaroka sy hitady ny vaovao ilain'izy ireo ny mpivarotra mba hahitana traikefa fiantsenana tsara kokoa.
Fikarakarana fandoavam-bola ao amin'ny magazay - varotra ao amin'ny rafitry ny varotra mampivarahontsana, fahagola, lafo vidy tokoa ho an'ny takelaka tafiditra ao anaty Internet hatramin'ny fizotry ny fandoavam-bola, ny fitantanana ny lisitra ary ny tatitra…. amin'ny ampahany amin'ny habe sy ny vidiny.
Tags: fitadiavana mpanjifakiosk nomerikaHafanàm-po an signagein-pivarotanatraikefa amin'ny fivarotanakiosksmokiteboka fivarotanaantsinjaranytraikefa an-tsenakioska takelaka